WaterMinder - ရေ Tracker | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » WaterMinder - ရေ Tracker နှင့်သောက်သတိပေးချက်
WaterMinder - ရေ Tracker နှင့်သောက်သတိပေးချက် APK ကို
WaterMinder သငျသညျ, သင့်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်မှုရှုမြင်ရေရည်မှန်းချက်ကိုတွက်ချက်, သတိပေးချက်များကနေတဆင့်လှုံ့ဆော်ရ, သင့်နေ့စဉ်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နှင့်ဆုအနိုင်ရခွင့်ပြုနေ့စဉ်ရေ tracker တွင်အနိုင်ရကာဆုချီးမြှင့်ပါ! ယခု Download!
WaterMinder, သင့်ရေစားသုံးမှုကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိ app ကိုနှင့်အတူအကူအညီရယူပါ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, လှုပ်ရှားမှု, ရာသီဥတုတည်နေရာ (သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်) အပေါ်အခြေခံပြီး, WaterMinder သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိရေကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်အမြင်အာရုံဖြည့်ပါနှင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်ချက်ချင်းသင်သည်ဓါတ်ကိုပြန်လည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသိကြလိမ့်မည်!
💧သင့်ကြွက်သား 75% ရေများမှာ
💧သင့်ဦးနှောက် - 90% ရေ
💧သင်၏အသွေး - က 83% ရေ
💧တောင်မှသင့်ရဲ့သွေ့ခြောက်သောအရိုး 22% ရေများမှာ!
ဒါဟာကျနော်တို့ရေကိုသောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်, ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။ ထိုအခါငါတို့တှငျအများစုဟာအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေကြောင်းအကြံဉာဏ်ကိုခံရကြပြီ။ ကျနော်တို့မထိုက်မတန်နေဖို့ကျန်းမာစောင့်ရှောက်ရန်သောက်ရန်ပြောသည်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့ရေပျော်မွေ့!
📱သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှုလိုအပ်ချက်ခြေရာခံခြင်းနှင့်သေချာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းစွာဓါတ်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ပါသည်အောင် TODAY အလုပ်များကမ်ဘာပျေါတှငျလှယျကူသောလုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ WaterMinder သင်ကူညီကြပါစို့
💧, ရိုးရှင်းသောမြန်ဆန် interface ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူ (ရုံ 1 အိုင်ကွန်နှင့် menu ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါကသင်၏ရေစားသုံးမှုကိုခြေရာခံ / log ရန်သင့်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်)
💧နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု Calculator ကို
အမြန်ခြေရာခံဘို့ Pre-defined ခွက်💧
💧သင့်ရဲ့ခွက်များ, အရောင်များ, icon များ, အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
💧ဓါတ်ကိုပြန်လည်တည်းခိုနေဖြင့်အောင်မြင်မှုများ / ဆုရယူနိုင်သော
💧မြန်ရေခြေရာခံခြင်းများအတွက် Widget လေး
💧အမေရိကန် Oz, ဗြိတိန် Oz နှင့် ML ယူနစ်
ကျန်းမာနေဖို့နှင့်ထို့ထက် ပို. ရေကိုသောက် - ကိုယ့်ကိုကိုယ် hydrate!
WaterMinder အသုံးပြု Thank you! ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ app ကိုရန်သင့်အားအကြီးအ features အသစ်နှင့်တိုးတက်မှုများကိုဆောင်ကြဉ်း။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကို အသုံးပြု. မဆိုပြဿနာများရှိပါက app ကိုအတွင်းပိုင်းကနေကျနော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမှရောက်ရှိဖို့အခမဲ့ခံစားရ, ငါတို့ထောက်ခံမှုထွက်ကူညီပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အခမဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်💧Unlockedပိုပြီး features တွေ
WaterMinder - ရေ Tracker နှင့်သောက်သတိပေးချက်
30.69 ကို MB